Natural Green Hand Cream – MILK | CosmeticMyanmar
Make Up (347)
Hands and Nails (79)
Home » Body Care » Natural Green Hand Cream – MILK
Natural Green Hand Cream – MILK
၈၀၀၀ ကျပ် / 30 ml
ဒီ Hand Cream လေးထဲမှာတော့ သဘာဝထွက်ကုန် နွားနို့ မှရရှိတဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ် များကို အခြေခံကာ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ် များကို အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးပြီး အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေချောမွေ့စေပါတယ်။ Hand Cream ဘူးလေးကလည်း ချစ်စရာကောင်းပြီး အလွယ်တကူ သယ်သွားလို့ရတာမို့လို့ အိတ်ထဲ မှာ အမြဲ ဆောင် ထားလို့ရတဲ့ Product လေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Magic Food Mango Hand Butter
Natural Green Hand Cream - BERRY MIX
Tags: Hand creamMILK
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ လက်သည်းတွေ ကျွတ်ဆတ်ခြင်းနဲ့ အိပ်မပျော် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်
ရုပ်ရည်ကို ပိုရင့်သွားစေနိုင်မယ့် မိတ်ကပ်လိမ်းနည်း အမှားများ
ကော်ဖီနဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် Body Scrub ပြုလုပ်မယ်
သွားတိုက်ဆေးကို ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ထောပတ်သီးနဲ့ မျက်နှာ ပေါင်းတင်လို့ ရနိုင်မယ့်နည်းများ
မျက်နှာအသားအရေကို အုန်းဆီ တစ်မျိုးတည်းသုံးပြီး အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ ထိန်းသိမ်းမယ်
0 မျက်နှာဖောယောင်တာနည်းအောင် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်း (၅) ခု
0 ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တော် တစ်ကယ်လည်းအသုံးဝင်မယ့် The Face Shop ရဲ့ ပစ္စည်းလေးကဘာဖြစ်မလဲ?
0 ချိုချဉ်လိုမျိုးခဏခဏမစားမိအောင် ထိန်းနေရမယ့် Jeffree Star ရဲ့ Velour Lip Scrub
0 မတူညီတဲ့ Sephora နှုတ်ခမ်းနီမျိုးစုံကို ပိုင်ဆိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
0 နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတဲ့ Tarte ရဲ့Life of the Party Clay Blush Palette and Clutch
မတူညီတဲ့ Sephora နှုတ်ခမ်းနီမျိုးစုံကို ပိုင်ဆိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
မျက်နှာဖောယောင်တာနည်းအောင် ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်း (၅) ခု
ချိုချဉ်လိုမျိုးခဏခဏမစားမိအောင် ထိန်းနေရမယ့် Jeffree Star ရဲ့ Velour Lip Scrub
ဈေးနှုန်းလည်းသင့်တော် တစ်ကယ်လည်းအသုံးဝင်မယ့် The Face Shop ရဲ့ ပစ္စည်းလေးကဘာဖြစ်မလဲ?
နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတဲ့ Tarte ရဲ့Life of the Party Clay Blush Palette and Clutch
Christmas ကို စိမ်းလန်းတဲ့အရောင်လေးတွေနဲ့ ကြိုလိုက်တဲ့ Innisfree
O.P.I ကနေ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ The Nutcracker Collection
၂၀၁၈ မှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်း K-beauty product များ
Collagen အားဖြည့်ထားတဲ့ Tresemmé တံဆိပ် Collagen + Fullness Conditioner
မိတ်ကပ်ပြင်တဲ့နေရာမှာ အလန်းစား ဖြစ်စေမယ့် Kryolan ရဲ့ Pure Pigments Metallic
လက်သည်းနီအမြဲဆိုးနေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်လား?
Highlighter Game ကို အစွမ်းကုန်မြှင့်တင်ပေးမယ့် Fenty Beauty ရဲ့ Killawat Foil Freestyle Highlighter Duo
လင်းလက်တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေအတွက် Morphe ရဲ့ Glitter Fever Metallic Eyeshadow
ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံသားတွေအတွက် Charlotte Mensah တံဆိပ် Manketti Oil Finishing Mist
Topshop Beauty ရဲ့ တလက်လက် တောက်ပနေတဲ့ Glitter Eye Shadow
လက်ကလေးတွေ ချောမွေ့နေစေဖို့ တာဝန်ယူမယ့် Tony Moly x Monsta X ရဲ့ Handcream Series
မျက်နှာလေးကို ရွှေရောင်လို ဝင်းပသွားစေမယ့် Gold Waves Cream Foundation!
ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Chinese Ginseng & Rice Mask!
Detoxifying Charcoal Black Sugar Mud Mask နဲ့ဆို တခြားမလိုတော့ဘူးနော်!!
Matte Type လည်းဆိုးချင်တယ် နှုတ်ခမ်းခြောက်မှာလည်းကြောက်တယ်ဆိုရင် Innisfree ရဲ့ Vivid Cotton Ink ကိုသုံးကြည့်